Tohizo ny firosoanao manatona Ahy | Fondation des Choisis de Jésus
Tohizo ny firosoanao manatona Ahy
1C_14: R’ilay Bitikako, aoka ianao tsy hatahotra ; tohizo ny firosoanao manatona Ahy, avelao ho tantanako ianao. Izaho no Mpampianatra anao. Tariako ianao hatramin’ireo antsipirian’ny fiainanao. Tohizo ny manome Ahy ny fanaikenao. Tiako ny mahita anao manaiky sy mandray izay tiako omena anao. Amin’izay ianao lasa « Fitiavana ».